‘किन मस्ती गरिस् ?’ – KhabarTime
काठमाडौँ / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधीसभा विघटन गरेपछि निवर्तमान खानेपानीमन्त्री भएकी बिना मगर अहिले परिवारका सदस्यसंग रमाउन थालेकी छिन् । दाहाल नेपाल समुहले आयोजना गरेको विभिन्न भेलाहरुमा सहभागी हुँदै वालक छोराहरुलाई आफुसंगै घुमाएर मातृ वात्साल्यको अनुभुती संगाल्दै छिन् । विभिन्न पदमा हुँदा घर परिवारलाई समय दिन नसकेकी बिना राजनितीकर्मी मात्रै भएर आमा पनि बनेकी छिन् ।
पछिल्लो पटक उनले सामाजिक सञ्जाल फेशबुकबाट एउटा तस्विर सार्वजनिक गरिन् । जुन तस्विरमा एउटा कारमा उनी सहित उनका दुई छोरा र भान्जी छन्, कतै जाँदै गरेका । क्याप्सनमा लेखेकी छिन् ‘हामी यता छौं ।’ नातामा नेकपा दाहाल नेपाल समुहका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कि बुहारी हुन् बिना । उनका छोरा प्रकाशको निधन भइसकेको छ भने प्रकाशको निधन भए लगत्तै उनले प्रकाशको जेठी श्रीमतीबाट जन्मेका छोरालाई पनि आफुसंगै राखेर हुर्काएकी छिन् । परिवारका सदस्यका अनुसार सौताको छोरालाई पनि असाध्यै माया गर्छिन् उनी ।
राजधानी दैनिकले अगाडी लेख्दै भनेको छ, राजनितीमा कलिलै उमेरमा छलाङ मारेकी बिना जिम्मेवारी पाए लगत्तै आलोचना खेप्ने पात्र मध्येमा पर्छिन् । ससुराको कृपाले खानेपानी मन्त्री पद पाएको अभियोगसंगै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट इटालियन कम्पनीले हात झिक्दा बिनालाई ठूलै रकम माग गरेको अभियोग लाग्यो ।
यद्यपि नेपालमा राजनितीक दलमा पदासिन व्यक्तिले घुस खानुलाई संस्कारको रुपमा बुझ्ने शैलि विकास हुँदै गएकाले ठेकेदारसंग पैसा मागेको प्रसंगले खासै असर गरेन । कलिलै उमेरमा एकल हुन पुगेकी बिनाले श्रीमानको निधन भए लगत्तै सौताको छोरालाई असाध्यै माया गरेर आफैंले पालन पोषण गर्नु वास्तवमै सरहानिय कार्य हो तर, नेपाली समाज विवेकशील भइनसकेको हो कि भन्ने छनक बिनाको स्टाटसमा लेखिएको कमेन्टले स्पष्ट पार्छ ।
मन्त्री हुँदा बिनाले गडबडी गरेकी छिन् भने सम्बन्धित निकायले छानबिन गरेर कार्वाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ । त्यसमा कुनै शंका छैन । तर, छोरा र भान्जीलाई गाडीमा राखेर घुमाइन भन्दैमा ‘लुटेको पैसाले मस्ति’ भनेर टिप्पणी गर्नु उचित हुन्न कि ?मन्त्री हुँदा पनि उनले चैनले काम गर्न पाइनन् ।
अरुका कुरा छाडौं प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले अन्तरर्वाताको क्रममा प्रचण्डको जबरजस्तीले बुहारीलाई मन्त्री बनाएको भनाई राखे । अहिले पनि बेला मौकामा त्यही शब्द दोहो-याइरहेका छन् । मन्त्री हुँदा किन काम गरिनस् भनेर प्रश्न गर्नेहरु अहिले फेरि नयाँ प्रश्न गर्न थालेका छन् ‘किन मस्ती गरिस् ?’ के कलिला छोराहरुलाई नयाँ ठाउँ घुमाउन र आमाको माया दिनु पनि बिनाको अपराध नै हो त ? उनको स्टाटसमा कमेन्ट गर्नेहरुलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ पनि देखिन्छ ।
#हार्दिक_श्रद्धाञ्जली! "यो दाजुको मिर्मिरे आँखा" गीतका सर्जक धनबहादुर अब हामी बीच रहेनन्